Kefir yamanzi | Ukutya kukaNutri
I-Kefir kukutya okunempilo kakhulu kodwa kwangaxeshanye kunzima ukukufumana ukwenza nokuba kukodwa amanzi kefir okanye ubisi, iintlobo ezimbini ze-kefir ezikhoyo.
Kefir iye iipropathi probiotic Inomdla kakhulu emzimbeni, ifuna ukulungiswa kobugcisa kunye nokulandela izikhokelo zokwenza i-kefir yamanzi.
I-kefir yamanzi, njenge-kefir yobisi, ine-microflora efanayo. Kule meko, i-kefir yamanzi kulula ukuyenza kuba awudingi lubisi oluhlaza ukuyenza.
1 Kefir yamanzi
2 Indlela yokwenza amanzi kefir
2.1 Izixhobo zokuyilungiselela
2.2 Izithako ezifunekayo
2.3 Ukulungiselela, inyathelo ngenyathelo
3 Iipropati zamanzi e-kefir
Ukuba uhlala unengxaki yempilo yamathumbu, unokwenza i-kefir yamanzi ukuba ikhathalele impilo yakho kwaye ihlale yomelele, ukongeza, ukulungiselela amanzi kefir ekhaya kulula, kufuneka ufumane iprobiotic ukuze ukwazi ukonwabela la manzi anegwele.
Ukwenza i-kefir yamanzi, kufuneka iinkozo ze kefir, ukwenza isiselo esisekwe emanzini. Ezi ngqolowa zipakishwe nge iiprobiotic, kwizinga eliphezulu iintsholongwane ezibakho kwindawo enye. Ezi bhaktheriya zinokusinceda sihlale sisempilweni kwaye sikhuseleke ngakumbi.
Ezi probiotic, ziibhaktheriya ezilungileyo ezifumaneka kwinkqubo yokwetyisaZibalulekile ekucoleni ukutya kunye nakwizakhamzimba zokungena kwigazi lethu, ukongeza ekusikhuseleni kwizifo.
Amajoni omzimba akhuselekile kwaye azuza amandla ngakumbi, ukuba siziva sibuthathaka, ukungacoleki kakuhle, isicaphucaphu okanye iingxaki xa sisiya enkonzweni, qaphela kwaye ufunde ukwenza Kefir yamanziukukugcina usempilweni kwaye ucocekile. Ukongeza, ukugcina ukutya okufanelekileyo kunye nokwenza umthambo rhoqo.
Indlela yokwenza amanzi kefir
Ukulungiswa kwesi siselo elula, ngokukhawuleza kwaye inika iziphumo ezilungileyo kakhulu. Ifuna kuphela ixesha lokuphumla nokubila ngeenxa zonke Iiyure ze-48.
Ijagi yeglasi Ilitha enye
Isipuni somthi okanye iplastiki yokuvusa.
Ilaphu elicocekileyo, itawuli, okanye iifilitha zekofu zokugubungela ikharafi.
Ibhendi yerabha yokudibanisa izihluzi kunye nejagi yamanzi.
Isihluzo seplastiki sokususa ingqushu emanzini.
Iinkozo ze Kefir enamanzi.
Isiqingatha sendebe yeswekile emdaka.
Ukulungiselela, inyathelo ngenyathelo
Kuqala beka iswekile engqayini yeglasi. Yongeza isiqingatha sendebe yamanzi ashushu kwaye ugxobhoze de iswekile inyibilike ngokupheleleyo. Emva koko yongeza iikomityi ezi-3 zobushushu bamanzi kwigumbi, ngokuqinisekileyo phakathi kwama-20 nama-29 degrees.
Yongeza iinkozo ze-kefir ezine-hydrated kwaye uvale ijagi nge Iifilitha zekofu okanye ngetawuli. Eli nyathelo libalulekile njengoko ukubila kuvelisa iigesi kwaye ilaphu elinemingxunya liyafuneka ukuze iigesi zibaleke kakuhle. Shiya umphanda kwindawo ekhuselekileyo kwaye uhlale iintsuku ezimbini.
Nje ukuba ibile, hlula iinkozo ze amanzi kefir kwaye ubongeze kwinkonzo entsha yamanzi eswekile. Isiselo siya kuba sikulungele ukusetyenziswa.
Iipropati zamanzi e-kefir
Esi siselo senziwe ngamanzi sineempawu ezibalulekileyo ezisinceda sihlale sisempilweni. Okulandelayo sikuxelela ukuba zeziphi izibonelelo esiziziswa sesi siselo, ukuze uthathe isigqibo ngenye imini yokusenza ekhaya, uyakuqaphela ukuba umzimba wakho uya kuba sempilweni kakhulu.
Gcina i inkqubo yokugaya ukutya usempilweni.
Kusenza sizive simnandi.
Inceda ukubuyisela Flora yokwetyisa.
Ityebile kwizakhamzimba ezinje nge ibhola, i-vitamin B12, i-magnesium kunye ne-folic acid.
Yandisa eyethu ukuzikhusela.
Gcina i amajoni omzimba womelele kwaye usempilweni.
I-Kefir ilwa neentsholongwane ezimbi emathunjini.
Inceda ukwetyisa I-lactose. Yandisa ukunyamezelana kwethu neemveliso zobisi ukuba asinyamezelani.
Yehlisa uhlaselo ukusuka umbefu kunye negalelo lakho.
Iphucula iimpawu ze Isifo sengqondo sesifo.
Yilwa i ukomelela ngamaxesha athile.
Ukuphucula i Inkqubo yokwetyisa.
Yandisa i impilo yethambo ngomxholo wayo ophezulu kwi calcium.
Inciphisa umsebenzi we iiseli umhlaza.
Ithintela ukuvela kwe Umhlaza.
Los ngqolowa del Kefir Zisetyenziselwe iminyaka emininzi ukugcina umzimba kunye nomzimba usempilweni. Umsebenzi we iprobiotic zisinceda sive kamnandi. Njengoko sele ubonile, ukulungiswa kwesi siselo kulula kakhulu, kufuneka sifumane iinkozo ze-kefir kwaye sizivumele zibile emanzini.
Unokusilungiselela isiselo amaxesha ngamaxesha njengoko ufuna, ukuba uziva ukonqena kancinci kunye nokugaya okungalunganga ngexesha lonyaka, unokukhetha ukusela okanye utye iimveliso ezinje nge yogurt ye-yogurt okanye ubisi lwe-kefir esinokuthi iivenkile ezinkulu.
Sukuthalalisa kwaye uqale ukuchitha amanzi e-kefir asekhaya namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Kefir yamanzi
Izibonelelo ezisibhozo zetamatato yetsheri